Apple ၏ M1 | နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော Dropbox beta ကို ယခု သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်က mac ကပါ။
Apple ၏ M1 နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော Dropbox beta ကို ယခု သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
Dropbox သည် ၎င်း၏ file synchronization အက်ပလီကေးရှင်းကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် အလွယ်တကူ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Apple ARM ပရိုဆက်ဆာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။.
စီးခဲ့ရပါတယ်။ သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အဆင်မပြေမှုတစ်ခု ကုမ္ပဏီအတွက် ARM ပရိုဆက်ဆာများအတွက် ဗားရှင်းအကြောင်း ၎င်း၏ ပံ့ပိုးမှုဝဘ်ဆိုဒ်တွင် မေးခွန်းတစ်ခုကို ဖြေဆိုပြီးနောက် ၎င်းကို ကြေညာခဲ့သည်။ သူ့အပလီကေးရှင်းကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် အစီအစဉ်ဆွဲနေသည်။
လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်ခန့်က Dropbox မှ ယောက်ျားလေးများ စတင်ခဲ့သည်။ အပိတ် beta တွင် စမ်းသပ်ပါ။ အပလီကေးရှင်းသည် Apple ၏ ARM ပရိုဆက်ဆာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ပထမဆုံး စမ်းသပ်မှုတွေ အောင်မြင်တယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ကြေညာထားပါတယ်။ အသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် ဤ beta ရရှိနိုင်မှု.
ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် Dropbox ဖောက်သည်များ သို့မဟုတ် အခမဲ့ဗားရှင်းကို အသုံးပြုပါက M1၊ M1 Max သို့မဟုတ် M1 Pro ပရိုဆက်ဆာမှ စီမံခန့်ခွဲသည့် Mac လည်းရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဤပထမ beta ကိုသင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ ဒီပလပ်ဖောင်းပေါ်မှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ သင့်အကြောင်းအရာတွေကို ထပ်တူပြုနိုင်စေဖို့ Rosetta2emulator ကို အသုံးပြုဖို့ လုံးဝမေ့ပစ်လိုက်ပါ။
ဤနည်းဖြင့် လျှောက်လွှာတင်နိုင်သည်။ Apple ၏ ARM ပရိုဆက်ဆာများမှ ပေးဆောင်သည့် အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကို အပြည့်အဝ အသုံးချပါ။: ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ ၎င်းကို သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စက်များတွင် အသုံးပြုသည့်အခါနှင့် အထူးသဖြင့် ကြီးမားသောဖိုင်များနှင့် အလုပ်လုပ်သည့်အခါအတွက် အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ တရားဝင် Dropbox အပလီကေးရှင်းသည် Apple ၏ ARM ပရိုဆက်ဆာများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသေးသောကြောင့်၊ လက်ရှိအချိန်တွင် ၎င်းသည် beta တွင်ရှိနေပါသည်။ မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင် ဤပထမဆုံး Dropbox ကိုဖွင့်ထားသော beta ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ARM ပရိုဆက်ဆာများအတွက် သင်သည် ၎င်းကို ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။ ဤ link ကို။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » Apple ၏ M1 နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော Dropbox beta ကို ယခု သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ကောလိပ်ကျောင်းသားများအတွက် Apple ကမ်းလှမ်းချက်များကို အခွင့်ကောင်းယူပါ။
Apple သည် ဂျပန်ကားအပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူနှင့် 2020 တွင် ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။